I-1-10 yoluhlu lwe-71
Eli gumbi lokulala llibini linomtsalane kunye negate kunye negadi yayo kunye nendawo ekupakishwa kuyo izitrato isemaphethelweni wenqwelwana enkulu yegadi yeVictorian entliziyweni yeCamden. I-Oakley Square Lodge yindawo yeBakala II edwelisiweyo (embindini wenkulungwane ye-19) yakha ine-stucco emhlophe ecocekileyo. Kwangoko ...
Imiswe entliziyweni ye-Ealing, siyazingcwaba xa sibonisa indlu entle. Le ndawo inamagumbi okulala amabini, elinye igumbi elinye, igumbi lokuhlambela, ii-WC ezimbini ezahlukeneyo kunye negumbi lokuhlambela. Inekhitshini elicwangcisiweyo elivulekileyo, lanamhlanje kwisitayela kunye negadi kunye nendawo yokupaka abantu. Ezinye izibonelelo zibandakanya ...
Published by West London Hub
Siyavuya ukubonelela ngale ndlu yindlu yokulala emi-3 ukusondela kufutshane neHounslow High Street. Esi sakhiwo sinamagumbi amabini okulala (elinye lawo linendawo yokuhlambela nendlu yangasese), igumbi elinye, ikhitshi elinegumbi elinye kunye negumbi lokuhlambela losapho. Imizuzu eli-10 ukuhamba kwisitrato esiphakamileyo, iBritish Rail, kuphela ...
West London in London, Tw3 3rs
Published by Dream Homes Residentials Hounslow Ltd
Inkcazo eneenkcukachaIndlu yegumbi lokulala emithathu entle ebekwe entliziyweni yelali yaseBarnes, esandula ukuphinda yenziwe ngokutsha kwaye yanikezelwa ngexabiso elihle. Kumgangatho osezantsi kubonelela ngendawo enkulu yokwamkela enegumbi zeenkuni ezikhokelela kwigadi etyunjiweyo, kunye nekhitshi langoku kunye neW / C. Kumgangatho aphezulu kukho iibhedi ezintathu ...
I-3 I-Cottage Bed ukuya kwiRente eMpuma London
Siyavuya ukubonelela ngerente le ndlu entle kakhulu enamagumbi amathathu okulala kwigumbi lokuphumla elisemazantsi e-dockland eqhayisa ngokuhombisa kwale mihla, imigangatho yamaplanga, umphezulu wokugqibela, igumbi lokuhlambela ilitye, igadi enkulu yangasemva, ikhitshi ephezulu neyindawo enkulu yokusebenza. Kufumaneka indawo eyi-3 mins ukuya e-Mudshute DLR givi ...
East London in London, E14 3qr
Published by Citi Quays
Indlu entle yokulala yegumbi lokuhlala lama-2 elimi entliziyweni yeHampstead Kumantla egadi yasebhaybhile eqhayisa ngendawo yokuhlala enendawo yonke kunye nendawo entle ekufutshane neevenkile kunye nezinto ezikhoyo zeTempile Fortune.Coleridge Walk izibonelelo zayo ikufuphi nokusondela kwiivenkile kunye nezinto eziluncedo. ..
North London in London, Nw11 6at
Published by Hybrid Estates London.com